Family – Categories – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
My Mister (2018) Complete Unicode ဒီကားလေးထဲမှာဆို IUရဲ့လုံးဝကွဲထွက်နေတဲ့ characterနဲ့သရုပ်ဆောင်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့အသက်၄၀ကျော်အင်ဂျင်နီယာအိမ်ထောင်သည် အမေနှင့်အတူ,အလုပ်မရှိတဲ့အကိုတစ်ယောက်နဲ့ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာရူးရူးတဲ့ဲညီတစ်ယောက်နဲ့အစ်ကို၂ယောက်နဲ့အတူနေထိုင်လျက်ရှိတဲ့ ပါ့ခ်ဒုန်ဟွန်း ဒုန်ဟွန်းရဲ့ကုမ္မဏီကစီမံရေးမှုး ဂျွန်ယောင်း(Kim Young Min)နဲ့ရှုပ်နေပြီးတော့ ဒုန်ဟွန်းကိုကွာရှင်းချင်နေတဲ့ ပါခ်ဒုန်ဟွန်းရဲ့ဇနီးသည် ယွန်းဟီ(Lee Ji Ah)အဘွားအိုကိုစောင့်ရှောက်နေရတဲ့အကြွေးတွေနစ်နေတဲ့ အသက်၂၀ကျော် ကောင်မလေးလီဂျီအန် တစ်နေ့မှာတော့ ဒုန်ဟွန်းကို 50 million won ($50,000 USD) လက်ဆောင်လာပေးတာကိုမြင်လိုက်တဲ့ ဂျီအန်ဟာသူ့အကြွေးတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ အဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုယူဖို့ကြိုးစားပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး အဲ့တော့ ဂျွန်ယောင်းကိုချဉ်းကပ်ပြီး ဒုန်ဟွန်းကို ကုမ္မဏီကထွက်သွားအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အပေးအယူနဲ့သူ့အကြွေးတွေကိုဆပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာ...... ဒုန်ဟွန်းကိုဘယ်လိုချဉ်းကပ်မှာလဲ....... ဇနီးသည်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ဒုန်ဟွန်းကကောဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ.... ဂျီအန်ကကောသူ့အကြွေးတွေကိုဆပ်နိုင်မှာလား.... သူတို့နှစ်ယောက်အခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲ? ဘယ်လိုတွေကျော်လွှားကြမလဲ? ဆိုတာဒီကားလေးမှာကြည့်ရှုကြပါလို့ ဒီကားက တခြားပျော်စရာကားတွေနဲ့မတူပါဘူး ဘဝရဲ့ရုန်းကန်ရမှုတွေ အလုပ်ခွင်အလုပ်သမားတွေ အကြောင်းရိုက်ပြထားတယ် စစချင်းကြည့်ရင်ပျင်းစရာကောင်းတယ်ထင်ရင်ထင်လိမ့်မယ် သူတို့ကိုကြည့်ပြီးမွန်းကြပ်မိမယ် စိတ်ပင်ပန်းမိလိမ့်မယ် အစပိုင်းမှာအဲ့လိုထင်ရပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းကြည့်ရင်းနဲ့ ကြိုက်လာလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် အချိန်ပေးပြီးသေချာအေးအေးဆေးဆေးလေးကြည့် ကြည့်ပါလို့ Credit Review ဒီ Series ကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Ei Ko Ko Zin ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ဒီကားေလးထဲမွာဆို IUရဲ႕လုံးဝကြဲထြက္ေနတဲ့ characterနဲ႔သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတာကိုေတြ႕ရမွာပါ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့အသက္၄၀ေက်ာ္အင္ဂ်င္နီယာအိမ္ေထာင္သည္ အေမႏွင့္အတူ,အလုပ္မရွိတဲ့အကိုတစ္ေယာက္နဲ႔႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာ႐ူး႐ူးတဲ့ဲညီတစ္ေယာက္နဲ႔အစ္ကို၂ေယာက္နဲ႔အတူေနထိုင္လ်က္ရွိတဲ့ ပါ့ခ္ဒုန္ဟြန္း ဒုန္ဟြန္းရဲ႕ကုမၼဏီကစီမံေရးမႈး ဂြၽန္ေယာင္း(Kim Young Min)နဲ႔ရႈပ္ေနၿပီးေတာ့ ဒုန္ဟြန္းကိုကြာရွင္းခ်င္ေနတဲ့ ပါခ္ဒုန္ဟြန္းရဲ႕ဇနီးသည္ ယြန္းဟီ(Lee Ji Ah)အဘြားအိုကိုေစာင့္ေရွာက္ေနရတဲ့အေႂကြးေတြနစ္ေနတဲ့ အသက္၂၀ေက်ာ္ ...
TMDb: 8.8/10 27 votes
My Mister (2018) Complete
The World of the Married (2020) Complete Unicode Itaewon Class ဇာတ်ကားနေရာအစားထိုးဝင်လာတဲ့ကားလေးကတော့အောင်မြင်တဲ့ဇနီးသည်နဲ့သူမရဲ့ရှုပ်ထွေးပွေလီလှတဲ့အိမ်ထောင်ရေးဇာတ်ကြောင်းလေးပါ..ရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုပေမယ့်Romanceအမျိုးအစားလေးပါနော်.. Ji Sun Woo(Kim Hee Ae)ဟာဆိုရင်တော့ချစ်စဖွယ်သားတစ်ယောက်နဲ့ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီထောင်ထားတဲ့ခင်ပွန်းတစ်ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဇနီးသည် ဆရာဝန်တစ်ဦးပါ....ဥက္ကဠတစ်ဦးရဲ့အိမ်ကို အလည်မသွားခင်အထိသူတို့ဘဝကတည်ငြိမ် အေးချမ်းနေပါသေးတယ်... ချောမာလှပတဲ့ဇနီးနဲ့သမီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဉက္ကဠအိမ်ကိုသူတို့၂ဦးအလည်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့.............ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့သူမခင်ပွန်းကဘယ်သူ့ကိုမျက်စိကျမိမှာလဲ....???..သူမသိသွားပြီးတော့ရော ဘာတေဆက်ဖြစ်မှာလဲ.....???? အပိုင်း၁၆ပိုင်းပါဝင်ပြီးတော့ သောကြာနဲ့စနေညပိုင်းတွေမှာထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာပါ.... Credit Review Zawgyi Itaewon Class ဇာတ္ကားေနရာအစားထိုးဝင္လာတဲ့ကားေလးကေတာ့ေအာင္ျမင္တဲ့ဇနီးသည္နဲ႔သူမရဲ႕ရႈပ္ေထြးေပြလီလွတဲ့အိမ္ေထာင္ေရးဇာတ္ေၾကာင္းေလးပါ..ရႈပ္ေထြးတယ္ဆိုေပမယ့္Romanceအမ်ိဳးအစားေလးပါေနာ္.. Ji Sun Woo(Kim Hee Ae)ဟာဆိုရင္ေတာ့ခ်စ္စဖြယ္သားတစ္ေယာက္နဲ႔ေဖ်ာ္ေျဖေရးကုမၸဏီေထာင္ထားတဲ့ခင္ပြန္းတစ္ေယာက္ကိုပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ဇနီးသည္ ဆရာဝန္တစ္ဦးပါ....ဥကၠဠတစ္ဦးရဲ႕အိမ္ကို အလည္မသြားခင္အထိသူတို႔ဘဝကတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေနပါေသးတယ္... ေခ်ာမာလွပတဲ့ဇနီးနဲ႔သမီးကိုပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ဉကၠဠအိမ္ကိုသူတို႔၂ဦးအလည္သြားလိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့.............႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာတဲ့သူမခင္ပြန္းကဘယ္သူ႔ကိုမ်က္စိက်မိမွာလဲ....???..သူမသိသြားၿပီးေတာ့ေရာ ဘာေတဆက္ျဖစ္မွာလဲ.....???? အပိုင္း၁၆ပိုင္းပါဝင္ၿပီးေတာ့ ေသာၾကာနဲ႔စေနညပိုင္းေတြမွာထုတ္လႊင့္ျပသသြားမွာပါ.... Credit Review Quality 1080p Web-dl Episode 1 MEGAUP, Mega.nz , Storage M-Sub , MFile, Google Drive Episode2MEGAUP, Mega.nz , Storage M-Sub , MFile, Google Drive Episode3MEGAUP, Mega.nz , Storage M-Sub , MFile, Google Drive Episode4MEGAUP, Mega.nz , Storage M-Sub , MFile, Google Drive Episode5MEGAUP, ...